BUDDHIST TERMS' Dictionary: RAINS RETREAT PERIOD - ၀ဿာဝါသ
RAINS RETREAT PERIOD - ၀ဿာဝါသ
RAINS RETREAT PERIOD Vassᾱvᾱsa
၀ဿာဝါသ - ၀ါဆိုခြင်း၊ ၀ါကပ်ခြင်း၊ မိုးသုံးလအတွင်း ၀ါဆိုသည့်ကျောင်းတိုက် အာရာမ်တွင်းမှာ နေရခြင်း။
၀ါဆိုမှုသည် မြတ်စွာဘုရားရှင် သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကပင် ရှိခဲ့သည်။ ၀ါဆို ၀ါကပ် ဥပဒေ မပညတ်မီက ရဟန်းများသည် ဥတုသုံးလီ နေပူမိုးရွာမရှောင် လှည့်လည်သွားလာနေခဲ့ကြသည်။ မိုးကာလ လူတို့စိုက်ပျိုးထားသော စိုက်ပျိုပင်များကို ရဟန်းတို့ ကျော်ဖြတ်နင်းကြသဖြင့် စိုက်ပျိုးပင်များ ပျက်စီးသောကြောင့် လူတို့က ရဟန်းများကို ကဲ့ရဲ့ကြသည်။ မြက်သစ်ပင် ရေပေါက်ငယ်များကိုပင် အသက်ရှိသည်ဟု ယူဆသူများလည်း ရှိနေသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဘုရားသားတော် ရဟန်းများသည် အပင်ငယ်များနှင့် ပိုးမွှားများကို နင်းခြေဖျက်ဆီးလျက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ခရီးသွားနေကြပါသနည်း။ သာသနာပြင်ပ တိတ္ထိတို့သော်မှ မိုးဥတုတွင် ခရီးမထွက်ဘဲ ကြောင့်ကြမဲ့ နေနိုင်ကြသည်။ ယုတ်စွအဆုံး ငှက်တိရစ္ဆာန်တို့သော်မှ မိုးကာလတွင် အသိုက်၌နေကြသည်။ အပင်ငယ်များ သတ္တ၀ါငယ်လေးများ ပျက်စီးသေကြေ ကြရသည်ဟု ကဲ့ရဲ့ပြစ်တင် ရှုတ်ချကြသည်။
ထို့ကြောင့် ဘုရားရှင်က ရဟန်းတော်များ မိုးသုံးလကာလပတ်လုံး ခရီးမထွက်ရသော ၀ါဆို ၀ါကပ် ဥပဒေကို ပညတ်ခဲ့ရသည်။
၀ါကပ်ခြင်း နှစ်မျိုးရှိသည် -
(၁) ပုရိမ၀ဿာဝါသ - ပထမ၀ါကပ်ခြင်း၊ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့၌ ၀ါကပ်၍ သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့တွင် ၀ါကျွတ်သည်။
(၂) ပစ္ဆိမ၀ဿာဝါသ - ဒုတိယ၀ါကပ်ခြင်း၊ ၀ါခေါင် လပြည့်ကျော်တစ်ရက်နေ့၌ ၀ါကပ်၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့တွင် ၀ါကျွတ်သည်။
Observing the rains retreat period: confining oneself toaspecific monastic dwelling for the three month rainy period
During the three months of monsoon rains, bhikkhus go into retreat atamonastery designated beforehand at the start of the rainy season. The practice was introduced during the life-time of the Buddha. Before the Buddha decreed the rains retreat period, bhikkhus walked across fields under cultivation. People started to criticize them as some people believed that plants and even drops of water were living beings. Why is it that the disciples of the Buddha go on travels all the year round and trample young plants and insects into oblivion while even member of other sects do not go on journeys during the rains? Even birds and animals have the good sense to stay in their nets or dens during the rains, people complained. To an end to this controversy the Buddha decreed that the rains-retreat period be observed. Rains retreat period may be observed by taking up the designated residence during one of the two periods:-
(1) Earlier rains retreat period (purimavassᾱvᾱsa), commencing from the day after the fullmoon of Wazo (roughly corresponding to July) and ending on the fullmoon day of Thadingyut (roughly corresponding to October);
(2) Later rains retreat period (pacchimavassᾱvᾱsa), commencing from the day after the fulmoon of Wagaung (roughly corresponding to August) and ending on the fullmoon day of Dazaungmon (roughly corresponding to November).